Nepstock - Nepal stock exchange (nepse) live trading data
IPO Read More ...
FPO Read More ...
Right Issues Read More ...
Posted on November 30, 2020 November 30, 2020 AuthorNepstockLeaveacomment
पछिल्ला केही दिनदेखि नेप्सेले दैनिक नयाँ रेकर्डहरु बनाइरहेको छ। २०७३ साउन १२ गते बनेको अलटाइम हाइ रेकर्ड तोडेर उकालो लागेको नेप्से, दैनिक नयाँ उचाइमा पुग्दै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको हो। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.४६ प्रतिशत अर्थात २८.७९ अंक बढेर १९९७.०५ विन्दुमा पुगेको छ। Read More …
शेयर कारोबार ठप्प, लगानीकर्ताको आन्दोलन, कारोबार नगराउन ब्रोकरलाई धम्की
Posted on June 5, 2018 AuthorNepstockLeaveacomment
मंगलबार यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्सेमा कुनै पनि कारोबार भएन, जस्तो कारण थियो लगानीकर्ता को आन्दोलन । सोमबार लगानीकर्ताले कारोबारमा सहभागी नभई नेप्से तथा धितोपत्र बोर्ड घेराउ गरेका थिए । लगानीकर्ताका संघ संस्थाले कारोबार बहिष्कारगरी आन्दोलनमा गएपनि सोमबार नेप्सेमा ४२ करोड बढीको कारोबार भएको थियो Read More …
Categoriesनेप्सेTagsनेप्से, बजेट, सेयर
आगामी वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक आज
Posted on May 29, 2018 AuthorNepstockLeaveacomment
हालसम्मकै शक्तिशाली सरकारले आज आगामी वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । महत्वकांक्षी प्रधानमन्त्रीका विज्ञ अर्थमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा पुरा गर्न कस्तो बजेट ल्याउलान् सर्वत्र चासो र कौतुहलताको बिषय रहेको छ । नियमन निकायमा रहँदा कठोर मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट Read More …
२५५५ औं बुद्ध जयन्तिको मंगलमय शुभकामना !!
Posted on April 30, 2018 April 30, 2018 AuthorNepstockLeaveacomment
शान्तिको दूत भगवान श्री गौतम बुद्धको २५५५ औं जन्म जयन्तिको शुवर्ण अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ । साथै, यस अवसरमा नेपालीहरुलाई वुद्धको वाणी प्राप्त होस्, आपसी सदभाव रहोस् र भाईचाराको नाता कायम होस् भन्ने प्रण गर्दछौं ।
नेप्से सुचारु तर वेभसाइट नचल्दा अन्योल
Posted on April 4, 2018 AuthorNepstockLeaveacomment
नेपाल स्टक एक्सचेञ्च (नेप्से)को वेभसाइटमा समस्या आएर बुधबार सेयर कारोबार संचालन भएपनि लगानीकर्ता भने अन्योलमा परेका छन् । नेप्सेको वेभसाइटमा आएको समस्याले लगानीकर्ताले सेयर बजारको बारेमा आवश्यक जानकारी लिनबाट पाएका छैनन् ! यता नेप्सेले आफ्नो आन्तिरिक कारणले नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकका कारण वेभसाइट Read More …
Categoriesनेप्सेTagsनेप्से, बजार, सेयर
नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, अस्थिर बन्दै सेयर बजार
Posted on December 4, 2017 AuthorNepstockLeaveacomment
गत साता लगातार तीन दिन बढेकाे नेप्से परिसूचक यस साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार दोहोरो अंकले घटेको छ । कारोबारमा आएका १० उपसमूहमध्ये होटल र उत्पादन बाहेक अन्य आठवटै समूहमा रातो रङ्ग पोतिएपछि समग्र बजार ओरालो लाग्न पुगेको हो । विगत १५ दिनको नेप्सेको कारोबार Read More …
छठ पर्व/ डाला पूजाको कारण आज नेप्से बन्द आइतबार बाट कारोबार सुचारु हुने
Posted on October 26, 2017 AuthorNepstockLeaveacomment
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) को आजको कारोबार बन्द रहेको छ । छठ पर्वको आवसरमा बिहिबार सार्बजनिक बिदा भएको कारण कारोबार बन्द रहन गएको हो . अब नेप्से आइतबार बाट सुचारु हुनेछ । बुधबार नेप्से परिसूचक १३.९२ अंकले घटेर १५५३.७२ हुन पुगेको थियो । कुल Read More …